धेरै मोटाइयो भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अव चिन्ता नलिनुहोस्, बजारमा आयो यस्तो 'प्रोडक्ट' जसले घटाउनेछ तपाईंको तौल !
ARCHIVE, CORPORATE » धेरै मोटाइयो भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? अव चिन्ता नलिनुहोस्, बजारमा आयो यस्तो 'प्रोडक्ट' जसले घटाउनेछ तपाईंको तौल !
काठमाडौँ - मोटोपना धेरैको समस्या हो । धेरै मोटाइएकै कारण व्यक्तित्वमा ह्राश आएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । महिला वा पुरुष जो भएपनि मोटोपनाले धेरैलाई पिरलो पारेको छ । तर अव धेरै चिन्ता लिनुनपर्ने भएको छ । किनकि बजारमा 'ग्यारोसीनिया कम्बोजिया' नामक प्रोडक्ट बजारमा आएको छ ।
उत्पादकका अनुसार यसले शरीरमा फ्याटको मात्रा बढ्न नदिएर शरीरमा भएको फ्याटलाई शक्तिमा बदल्ने काम गर्छ । भोक नियन्त्रण गरेर यो प्रोडक्टले शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्वसमेत प्रदान गर्ने उत्पादकको दावी छ । जति डाइटिङ गर्दा पनि वा जति कसरत गर्दा पनि मोटोपाना घाटाउन नसकेकाहरुका लागि यो प्रोडक्ट निकै नै उपयोगी भएको बताइएको छ । यो उत्पादन निकै नै सुरक्षित र प्राक्तितिक भएको समेत बताइएको छ ।
यता यसका प्रयोगकर्ताहरुले पनि यसको सेवनले आफ्नो तौल घटाएको बताएका छन् । यसका प्रयोगकर्ताले आफुहरुले नसोचेको तरिकाबाट उक्त उत्पादनले आफ्नो मोटोपना कम गराएको र यो मोटोपना समस्या भएका जो कोहिलाई पनि वरदान नै सावित भएकोसमेत बताएका छन् ।
यो उत्पादन डायटरी सप्लिमेन्ट हो । बाँकी जानकारी र खरिदका लागि तलको भिडियोबाट थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ ।